Neymar ayaa ka fiican Lionel Messi laakiin waxaa isna ka sii fiican Cristiano Ronaldo….(EEG tiro koobkan) – Gool FM
Byare October 24, 2016
(Spain) 24 Oktoobar 2016. Neymar ayaa kulankiisii 100-aad ee La Liga u saftay Barcelona ciyaartii dhaweyd ay dirqiga kaga adkaadeen kooxda Valencia.
Haddaba tiro-koob la soo saaray ayaa sheegaya in Neymar uu ka fiican yahay xiddiga ay isku kooxda yihiin ee Lionel Messi balse isna waxaa ka fiican Cristiano Ronaldo waa marka la eego 100-kooda kulan ee ugu horreeyay La Liga.
Neymar ayaa 100-kiisii kulan ee ugu horreeyay ee Barca garoonka lagu soo bilaabay 89-kulan halka Messi lagu soo bilaabay 76-kulan.
Wiilka reer Brazil ayaana muddadaasi 100-ka kulan ku dhaliyay 59-gool halka Messi uu ku dhaliyay 48-gool, wuxuu caawiyay Neymar 30-gool halka uu Messi caawiyay 26-gool.
Tiro-koobka boqolka kulan ee Neymar iyo Messi ayaa muujinaya in xiddiga reer Brazil uu in badan ka fiican yahay kabtanka xulka Argentina, laakiin waxaa isna in badan ka fiican Cristiano Ronaldo.
Kabtanka xulka Portugal ayaa 100-kiisii kulan ee ugu horreeyay Real Madrid horyaalka La Liga waxaa lagu soo bilaabay 96-kulan, wuxuu dhaliyay muddaas 111, laakiin dhanka caawinta ayuu kala siman yahay Neymar min 30-gool ayay caawiyeen.
Warta Nabadda Derby ama kullanka Qaranka ” Finalka koobka Janeraal Daa’uud oo waji kale yeelan kara